PRINCE2® (Projects IN Mamiriro Akarongedzerwa), inoshandiswa nenzira yepamusoro yekugadzira nzira iyo inokufambisa kuburikidza nezvose zvinokosha zvekushanda purogiramu yakabudirira. PRINCE2® inzira inoshandiswa uye inotarirwa kumarudzi ose emapurogiramu. PRINCE2® Foundation uye Practitioner dzichadzidzira vadzidzisi nehutano hwehutano hwakagadzirwa uye hunoshandiswa zvakanyanya nehurumende yeUnited States uye inoshandiswa munharaunda yega yega munyika yose. Iyo inogadziriswa uye yakaratidza nzira dzakanakisisa mumabasa ekugadzirisa. Iyi dzidzo ichakugadzirirai zvose PRINCE2® Foundation uye PRINCE2® Practitioner uye zvikwererero zvekuwana ichi chiyeuchidzo zvingave zvisinganyanyi kukosha mutengo wekutsvaga prince2.
PRINCE2® (Projects IN Mamiriro Akarongedzerwa), inoshandiswa nenzira yepamusoro yekugadzira nzira iyo inokufambisa kuburikidza nezvose zvinokosha zvekushanda purogiramu yakabudirira. PRINCE2® inzira inogadziriswa uye inotarisirwa kumarudzi ose emapurogiramu .PRINCE2® inoshandiswa zvakasiyana-siyana uye yakashandiswa zvikuru nehurumende yeUnited States uye inozivikanwa zvikuru uye inoshandiswa munharaunda yega, muUnited States uye munyika yose.
PRINCE2® (Projects IN Mamiriro Akarongedzerwa), inoshandiswa nenzira yepamusoro yekugadzira nzira iyo inokufambisa kuburikidza nezvose zvinokosha zvekushanda purogiramu yakabudirira. PRINCE2® inzira inoshandiswa uye inotarirwa kumarudzi ose emapurogiramu. PRINCE2® Foundation uye Practitioner dzichadzidzira vadzidzisi nehutano hwehutano hwakagadzirwa uye hunoshandiswa zvakanyanya nehurumende yeUnited States uye inoshandiswa munharaunda yega yega munyika yose.
Vadzidzisi Vakanakisisa Munyika Yose
Chigutsiro Kokumhanya Zvidzidzo
Dzokera kuAre Certification
Yakarongedza Hands-On Training
Chisarudzo cheZ9 Exotic Locations
Innovative Technology Solutions ndiyo kambani inopa mazano kune mumwe nomumwe, makambani uye makoroji paIt uye unyanzvi hwehutano. Kunze kwekudzidzisa ITS ine dzimba dzekudzidzisa dzinowanikwa munzvimbo dzose dzekambani dzeIndia nekuda kwekudzidziswa kwekambani.
Ndezvipi zvinobatsira zvekuva PRINCE2 Certification
Prince2 inozivikanwa zvikuru uye inozivikanwa. Haisi kungokupa teketeti yakasimba yekuwedzera kune yako zvakare, inowedzerawo kukwanisa kwako kuita zvikwereti munzvimbo yakabatanidzwa. Unyanzvi hwaunowana ndewemabhizimusi-agnostic uye ane ruzha rwepasi rose.
Ndingava sei unyanzvi hwechirongwa hwePRINCE2?
Kuti uve unyanzvi hwePINCE2 wakavimbiswa, unofanira kukwidzidzisa PRINCE2 kudzidzisa kubva musangano rekudzidziswa rakagamuchirwa seInnovative Technology Solutions uye kupfuura PRINCE2 Foundation uye Practitioner Exams. Mushure mekunge mazadza miviri iyi muongorori iwe uchava PRINCE2 unyanzvi hwechiratidzo.
Pane pane zvaidiwa zve PRINCE2 Certification?
Aiwa, hapana izvo zvinodiwa; Zvisinei, iwe unofanira kunge wakabvisa PRINCE2 Foundation Exam. Kuti uwane ruzivo rwakakwana iwe unogona taura nesu.
Ndingaita sei bhuku reZvitsa?
Iwe unogona kutora zvose zviri muIndaneti uye pepa-based exam yekuongorora Kutisangana nesu.
Iko Mari yekuongorora inowanikwa muTsika Dzematambudziko here?
hongu, mari yekuongorora inowanikwa mubhadharo yemari. Nokuda kwako, iwe unogona kuverenga kuongorora kwako kuburikidza neITS sezvo isu tiri hurumende kudzidziswa kweWeert.
Ndinogadzirisa sei kuongorora kwangu?
Kuti ubatsirwe pakugadzirisa muongorori wako, svika kune vashandi vekutengesa (mukati mutengesi maneja) kana kusimudza a chikumbiro kune boka rekutsigira reITS.
Inguva yakadini PRINCE2 certification yakakodzera?
TheFoundation testhaina nguva yekupera.
Vadzidzi vanopfuuraPractitioner examanozivikanwa se "PRINCE2®Registered Practitioner ". Vanhu vacharamba vakanyoreswa kwenguva yenguva yemakore matatu. Kuti varambe vakachengetedza mamiriro avo akanyorwa, Vashandi vanofanira:
Dzoserai muongorori wakazara weMuchengeti pamagumo emakore matatu
Chengetedza vhidhiyo yavo kuburikidza neUPRINCE2 Umoja.
Kuti urambe uri nhengo yezvino huri mubhizimusi unofanirwa kugutsa zvinotevera zvinotevera mukati memakore matatu:
Gara uhu huri mumwedzi mitatu uchipedza kuongorora kwako uye ugare uri nhengo yemakore matatu ekuvandudza kubhadhara gore negore
Chengeta PRINCE2 digital badge iyo ichapiwa sechikamu chehutano hwemakore matatu. Vadzidzi vachada kukodha 20 CPD inonongedza gore negore, mumitemo yakatarwa, kuitira bheji kuti iwedzerwe pakuvandudzwa.
Kana mumwe munhu akakwidza kugutsikana zviri pamusoro apa zvinotaridzirwa sezviripo uye akabudiswa chechipiri chekupedzisira kumagumo egore matatu inoshanda kwemamwe makore matatu. Iwe unongogamuchira chiziviso chitsva kana bhajiji yako yedijiti yakachengetwa kwemakore matatu emakore.
Ndeupi chiyeuchidzo chandichagamuchira mushure mekupedzisa kudzidziswa?
Mushure mokunge wapedza kubudirira kwekudzidzira & kuchenesa muongorori, iwe uchapiwa Chirongwa Chibvumirano kubva kuAxelos.
2 PRINCE2 Foundation uye Practitioner 2009 View More